Filed under: ဝတ္ထုတို — 15 Comments	August 3, 2009
>“ဘော် ဘူ……. ဘော်ဘူ”“ရထားလာနေပြီဟေ့”
“အဲ အခုမှ သတိရတယ်။ရထားလက်မှတ်မဝယ်ရသေးပါလား။”“အကြွေရှာဦးမှပဲ”ရောက်စက ရထားမလာသေးသဖြင့် အချိန်အတော်ရသေးသောကြောင့် ရထားလက်မှတ် မဝယ်မိတာ အခုတော့ ရေချမ်းတစ်ယောက် ရထားလက်မှတ်ဝယ်ရန် ဗျာများနေလေသည်။ အကြွေရှိလိုရှိငြား အင်္ကျီအိတ်ကပ်ထဲရော လက်ဆွဲအိတ်ထဲမှာရော အကုန်လျှောက်ရှာနေရပြီ။ နဂိုကမှ အကြွေ ကြိုတင်မဆောင်ထားသောကြောင့် ယခုလို အရေးအကြောင်း ပေါ်လာတော့ အကြွေကလဲ အတော်နှင့်ရှာမရ။ကံကောင်းထောက်မ၍ လက်ဆွဲအိတ်ရဲ့ဘေးအိတ်ထဲမှ အကြွေ ၅၀တန်တစ်ရွက် ရလိုက်လ်ို့ တော်သေးသည်။ဒီလို ညနေရုံးဆင်းချိန်တွင် လက်မှတ်သွားဝယ်လျှင် အကြွေမပေးပါက အတော်နှင့် အကြွေပြန်မရတတ်ဘူးလို့ ရထားစီးဖူးနေကြသော အသိတစ်ယောက်က ပြောပြထား၍ ရေချမ်းမှာ အခုလို ငွေအကြွေကို အသည်းအသန် ရှာနေရခြင်းဖြစ်သည်။အရင်က ရုံးဆင်းရင် လိုင်းကားကိုပဲ မရမက တိုးကြိတ်ပြီးစီးနေကြသော ရေချမ်းမှာ အခုတော့ အိမ်ရှင်သက်ထားရဲ့ အကြံပေးစကားကြောင့် ဒီကနေ့ ရုံးအဆင်းတွင် ရထားစီးပြန်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
လက်မှတ်ကလဲ အရင်စောမဝယ်ထားခြင်းကြောင့် ရထားမထွက်ခင်းမှီရန် ကသုတ်ကရုတ် အပြေးအလွှား သွားဝယ်ရပြန်သည်။ရေချမ်းလဲ ရုံးဆင်းချိန်ဖြစ်၍ ရန်ကုန် တိုးကြောင်ကလေး ရထားပေါ်သို့ လူအများနှင့် တိုးဝှေ့တက်ရင်း ရထားပေါ် မည်သိုမည်ပုံ ရောက်မှန်းမသိ ရောက်သွားသည်။“ရထားစီးရင် လေကောင်းလေသန့်လဲရ။ကားလိုလဲမဟုတ် ချောင်ချောင်ချိချိလဲစီးရတယ်။ဒီတခါ ရထားပြောင်းစီးကြည့်ပါလား”ဟုဆိုသော ဇနီးအေးမြရဲ့ စကားသံကို ကြားယောင်ရင်း –“အခုလိုအခြေနေဆိုရင် ရထားစီးရတာလဲ ကားလိုပါပဲ။ဘာမှမထူးဘူး။အတူတူပဲ။ ဒီအေးမြ သူဘယ်အချိန်းစီးခဲ့တဲ့ ရထားကိုပြောတာလဲမသိဘူး။”ဟု တစ်ကိုယ်ထဲ တိုးတိုးလေးရေရွတ်ရင်း အိမ်မှဇနီးသည် အေးမြကို အပြစ်တင်လိုက်မိသည်။
ရေချမ်းလဲ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်တွေးရင်း ဇိမ်လေးနဲ့ ရထားစီးလာရင်း ပုဇွန်တောင်အကျော် မလွှကုန်းဘူတာအရောက် –“လက်မှတ်လေးတွေ ပြပါခင်ဗျာ။လက်မှတ်လေးတွေ”ဟူသောရထားလက်မှတ်စစ်ရဲ့ အသံကိုကြားလိုက်ရင်း ဝယ်ထားတဲ့ လက်မှတ်ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ကိုင်ထားလိုက်သည်။ခဏကြာတော့-“ဟာခင်ဗျား လက်မှတ်မပြနိုင်ရင် ဒဏ်ငွေဆောင်ရမယ်။ဒါပဲ ““မဟုတ်ပါဘူးဆရာရယ်။ကျွန်တော်လက်မှတ်ဝယ်စီးမလို့ပါ။အိမ်က မကျန်းမာနေတဲ့ အမေအတွက် ဆေးလာဝယ်ရင်း မြို့ထဲမှာ ကျွန်တော့်ပိုက်ဆံအိတ် ခါးပိုက်နှိုက်ခံရလို့ပါ ဆရာရယ်။လက်မှတ်ဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံကလဲမရှိတော့ သူများတွေဆီအကူအညီတောင်းတာကလဲမရ၊ အိမ်မှာ တစ်ယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်အမေအိုကြီးကလဲ ကျွန်တော်ပြန်မလာရင် မျော်နေမှာပဲလို့တွေးရင်း စဉ်းစားမရတာနဲ့ ထွက်ခါနီး ရထားပေါ် တက်လိုက်လာရတာပါ ဆရာရယ်။ ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။နောင်ဒီလိုမဖြစ်စေရပါဘူး။”“မင်းတို့က ဒီလိုပြောတိုင်းရမလားကွ။ငါတို့မှာလဲ တာဝန်ဆိုတာရှိတယ်ကွ။ မရဘူးကွာ။ ဒါအလုပ်လုပ်နေတာကွ။မင်းမပေးနိုင်ရင် ငါနဲ့ရုံးလိုက်ခဲ့။”လူအများကတော့ ဒီလူနှစ်ယောက်ဖြစ်ပုံကို ကြည့်ရင်းသနားစရာအမူအရာနှင့် တောင်းပန်နေသော ကောင်ကလေးအပေါ် ဂရုဏာသက်သောအကြည့်များဖြင့် ဝိုင်းကြည့်နေကြသည်။ရေချမ်းတစ်ယောက် လက်မှတ်စစ်နှင့် လူငယ်လေးတို့ရဲ အကြိတ်အနယ်ပြောနေသံများကိုကြားရင်း ဘာဖြစ်နေတာပါလိမ့်ဟု လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ တောင်းပန်နေသောကောင်လေးမှာ ရေချမ်းနှင့် တစ်ရပ်ကွပ်ထဲနေသော ကောင်လေးဖြစ်နေသည်။ရေချမ်း ထိုကောင်လေးကိုတော့ မရင်းနှီးပေမယ့် သူ့အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းသိနေသည်။ရပ်ကွက်ထဲ အလုပ်ကိုမယ်မယ်ရရမလုပ်၊ လစ်ရင်လစ်သလို သူများပစ္စည်းများကိုလည်း အချောင်ယူတတ်သေးသည်။ အကျင့်ကလဲမကောင်းဟု ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ သူမကောင်းကြောင်း ပြောသူများကြသည်။ သူမှာတော့ သနားစရာကောင်းသော မကျန်းမာသည့် အမေအိုကြီးကတော့ တကယ်ရှိသည်။ အခုလောလောဆည် သူလိမ်နေသလား၊ဘာလားဆိုတာ အပထား ဒီကောင်လေးနှင့် ရထားစစ်သူတို့၏ လက်တလော အချင်းများခြင်းကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးရမလဲဆိုတာ ရေချမ်းစဉ်းစားနေမိသည်။ကောင်လေးကို ကြည့်တော့လဲ တကယ့်ကို ပိုက်ဆံအိတ် ခါးပိုက်နှိုက်ခံရသည်ပုံမျိုး တောင်းပန်နေတာ။ခက်တာက ဒီလောကကြီးမှာကလဲ ရုပ်ရည်သနားကမားနှင့် လိမ်ညာနေကြသူများကလည်း တပုံကြီးပင်။လက်မှတ်စစ်ကြီးကလဲ သူတာဝန်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကျေပွန်ချင်နေသည်ပုံ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူတစ်ယောက် မိမိရှေ့ဒုက္ခရောက်နေလျှင် လက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်သော ရေချမ်း၏ပင်ကိုစိတ်ရင်းကြောင့်“‘ဒီမှာခင်ဗျား။ဒီလိုလုပ်လိုမရဘူးလားဆရာရယ်။ဒီညီလေးရဲ့ကျသင့်တဲ့ဒဏ်ကြေးငွေကို ကျွန်တော်ပေးပါ့မယ်။အတတ်နိုင်ဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးပါဆရာရယ်။”“ဒီလိုဆိုရင်တော့ ရပါတယ်ဗျာ။ဒီမယ်ကောင်လေး နောင်တခါဆိုရင် ဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့။ဒီက ဆရာကြီးက ကူညီလို့ပေါ့ကွာ။မဟုတ်ရင် မင်းတော့ တရားဥပဒေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတော့မှာပဲ။”လူငယ်ကလေးကလဲ ရေချမ်းကို ကယ်တင်ရှင်တစ်ယောက်အလား ကျေးဇူးတင်သောအကြည့်ဖြင့် ကြည့်နေသည်။ရေချမ်းကလဲ ရပါတယ်ဆိုသော အကြည့်ဖြင့် ကောင်လေးအား နှစ်သိမ့်ရင်း မူလနေရာကို ပြန်သွားရပ်ရင်း ရထားပြတင်းပေါက်ဆီမှ တိုးဝင်လာသော လေများကိုရှုရင်း ရေချမ်းတစ်ယောက် ရောက်တတ်ရာရာ အတွေးနယ်ချဲ့နေတော့သည်။
တချို့မိဘတွေကြတော့လဲ သားသမီးတွေကို အသက်ပေး၍ ချစ်ကြသလို၊ တာဝန်သိတတ်သော မိဘတွေကလဲ အများကြီးပါ။မိဘတွေက တာဝန်ကျေကြသော်လည်း သားသမီးများကလည်း အရွယ်ရောက်လာတော့ အိမ်ထောင်ရက်သားတွေကြ၊ တစ်အိုးတစ်အိမ်ထူထောင်ကြ မိမိတို့အပေါ် တာဝန်ကျေခဲ့သောကိုယ်ရဲ့ မိဘတွေကိုမေ့ပြီး သားသမီးတာဝန် မကျေပွန်ကြသူကလည်းအများပေ။မိဘတွေက သားသမီးတွေအပေါ် အမျှော်လင့်ဆုံးက မိမိတို့သားသမီးများ၏ သိတတ်မှုပါ။ သားသမီးတွေကလည်း သူတို့မိဘတွေဆီက အမျှော်လင့်ဆုံးက မိဘမေတ္တာနှင့် တာဝန်သိမှုပါပဲ။အပေးအယူဆိုတာ နေရာတိုင်းမှာ ရှိကြပေသည်။မိဘတွေဆီမှ ကောင်းစွာထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်မှု မရှိခဲ့ပဲ သားသမီးတွေဆီမှ ကောင်းသောသိတတ်နားလည်မှု မမျှော်လင့်သင့်ပေ။အပင်တစ်ပင်ကို ကောင်းမွန်စွာ ရေလောင်းပေါင်းသင် ဓာတ်မြေသြဇာမကျွေးပဲ ထိုအပင်မှ အသီးကောင်းစားချင်၍မရပေ။ထို့အတူပဲ ညီအကိုမောင်နှမ၊ ဆွေမျိုးသားချင်း၊ လင်နှင့်မယား အားလုံးတို့မှာလဲ သူအပိုင်းနှင့်သူ တာဝန်ကိုယ်စီရှိကြသည်။တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦးအပြန်အလှန်မေတ္တာထားမှ ကြည့်မှန်ကဲ့သို့ပင် အသွားအပြန်မေတ္တာရှိပေမည်။
ဟူ၍ လောကနီတိတွင် ဆိုထားပေသည်။အရွယ်သုံးပါးစလုံး ထမ်းဆောင်ရမည့် လူသားတို့၏ တာဝန်ဖြစ်ပါသည်။ရေချမ်းလဲ မိုးလင်းမိုးချုပ် အလုပ်တာဝန်များထမ်းဆောင်ရင်း ဒုတိယအရွယ်ရဲ့ တာဝန်တွေကို ကြေပွန်စွာထမ်းဆောင်ရမည်ဟု အပြုံးများဖြင့်တွေးကာ စဉ်းစားနေသည်။ မီးအလင်းရောင်များလဲ အနည်းငယ်မြင်နေရပြီး ရထားအရှိန်လဲတဖြေးဖြေးလျော့လာသည်ကို သတိပြုမိရင်း ရေချမ်းတစ်ယောက်လဲ မိမိ၏အတွေးကမ္ဘာလေးကနေ ထွက်ခွာလိုက်သည်။ ရထားပေါ်မှာလဲ ထွက်လာခါစကကဲ့သို လူတွေမများတော့ပေ။ရေချမ်းလဲ အပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ဒဂုံတောင်မြောက်လမ်းဆုံကို ရောက်နေပြီ တိုးကြောင်လေးဘူတာလဲ ရောက်ခါနီးနေပြီး လက်တွင်ဆွဲထားသောအိတ်ထဲ အိမ်အတွက်ဝယ်လာသော သားကြီးအတွက် ဗလာစာအုပ်နှင့် ခဲတံ၊ အငယ်လေးအတွက် ဘီစကွတ်ထုပ်၊ ဇနီးအေးမြအတွက် ကော်ဖီမှုန့် စတဲ့ အေးမြမနေ့ကမှာထားသော ပစ္စည်းများ စုံလင်မလင်ကြည့်ရင်း တိုးကြောင်လေးဘူတာတွင် ရေချမ်းစီးလာသောရထားကြီးသည် မိမိ၏တာဝန်ပြီးဆုံးသွားသဖြင့် ရပ်နားလိုက်ပေသည်။ ရေချမ်းလည်း ရထားပေါ်ကဆင်းလာပြီး အိမ်ဖြင့်ဘူတာက အတော်လေးလှမ်းသေးသဖြင့် ဆိုက်ကားစီးရန် ဆိုက်ကားဂိတ်သို့ ခပ်သွက်သွက်ကလေးဦးတည်လိုက်သည်။“လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်လမ်းပို့ပေးပါဗျာ”ဟု ဆိုက်ကားဆရာကို ပြောပြီး တနေ့တာအိမ်အလုပ်များကို သိမ်းကြုံးလုပ်ရင်း သားနှစ်ယောက်နှင့်အတူ ညစာအတူတကွစားရန် ရေချမ်းကို မျှော်နေကြသော အေးမြနှင့် ကလေးတွေကိုတွေးရင်း ရေချမ်းတစ်ယောက် တနေ့တာအမောများပျောက်ကာ ပြုံးနေမိတော့သည်။
15 Comments: mysterysnow
August 3, 2009 at 4:04 am	>ကိုချမ်းကြီးရေဝတ္တုတိုလေး လာခံစားသွားပါတယ်…ကိုချမ်းကြီးရဲ့ ဝတ္တုတိုလေးက ဖတ်လို့ကောင်းတယ်…ပြီးတော့ အတွေးတချို့ကျန်နေခဲ့တယ်….
August 3, 2009 at 5:06 am	>မောင်ဝင်းကြည်ရေ……..ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တဲ့ မောင်ရေချမ်းအတွေးပုံရိပ်တွေ လာဖတ်တယ်နော်။ ဘာမှ မပြောတတ်ဘူး။ကောင်းတယ်။ ဒါပဲ။ ဟိဟိ
August 3, 2009 at 10:01 am	>ကောင်းလိုက်တဲ့ အတွေးပုံရိပ်လေးတွေဘယ်သူရေးတာလဲ..ကိုဝင်းကြည်လား..မ၀င်းကြည်လားဟား..ဟား…အရမ်းကောင်းပါတယ်လို့..ဘ၀ ကလည်း ရထားလိုပဲနော်..သေချာတွေးကြည့်ရင်းဘူတာမျိုးစုံမှာရပ်..ပြီးတော့ဆက်သွား..အတွေ့အကြုံ ..ခံစားချက်မျိုးစုံဆိုတဲ့ ခရီးသည်တွေတင်ပြီး..ခရီးနှင်နေလိုက်တာ…နှလုံးသား တစ်ထောင့်မှာတောင်..ဥသြ ဆွဲသံတွေကြားနေရတယ်နော်….မိသားစု ပျော်ပါစေခင်ဗျာ
August 3, 2009 at 10:24 am	>အိမ်ပြန်လမ်းမှာ ကြုံတဲ့ဘ၀မြင်ကွင်းလေးတွေကို ပြောချင်တဲ့ ဘ၀ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ ချောချောမွေ့မွေ့ ပေါင်းစပ်ပြသွားတယ်လို့ ထင်မိတယ်..။အရေးအသားရော အယူအဆရော ကောင်းပါတယ်…။(စာဖတ်သူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ပြောတာပါ)
August 3, 2009 at 12:13 pm	>ဒီပို.စ် လာဖတ်တာ2ခါရှိပြီ အကိုရေ …ပုံမှန်လူတစ်ယောက်ရဲ. ရိုးရိုးလေးအတွေးဖြစ်ပေမဲ. သတိမမူ ဂူမမြိုင်တဲ.အတွေး မျိုးလေးပါဘဲဗျာ…အားပေးလျက်..
August 3, 2009 at 7:18 pm	>သားနှစ်ယောက်ဟုတ်ပါဘူးဗျ။ ၁ယောက်နဲ့ ၁ပိုင်းပါ။ နောက်ပြီး မအေးမြလားဗျ။ မပွင့်နဲ့ တိုင်မှာနော်။ ခိခိ။ မောင်ဝင်းကြည်ဆီကို အလုပ်က ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း အပြေးလာဖတ်တာ။ ဟဲဟဲ။ အဲ့ဒါကို ဘာမှလဲ မကျွေးဘူး။ ဟွင်း။ အတွေးပုံရိပ်လေးကို သဘောကျတယ်ဗျာ။ =)
August 4, 2009 at 6:44 am	>ကိုရေချမ်းနဲ့အတူတူ ရထားလာစီးတာပါကိုရေချမ်းက လမ်းဆုံးဘူတာမှာ အိမ်ပြန်ရောက်ပေမဲ့စာလာဖတ်တဲ့ အနော်တော့ ဘူတာ မဆုံးသေးလို့ အိမ်ပြန်မရောက်သေးပါ…. :(မျက်စိထဲ မြင်သာအောင်ကို ရေးဖွဲ့နိုင်ပါတယ်ဝတ္ထုတိုကောင်းလေး တပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်ရလို့ စိတ်ထဲ ကျေနပ်သွားပါတယ်
August 4, 2009 at 12:20 pm	>ကိုရေချမ်း(ခ) ကိုချမ်းရေအတွေးပုံရိပ်လေးတွေ ဖတ်ပြီးအတွေးတွေပုံဖော်သွားပါတယ်ခင်မင်စွာဖြင့်သီဟသစ်
August 5, 2009 at 1:29 am	>ဘ၀နဲ့ နီးစပ်တဲ့ စာတွေကို တကယ်နှစ်သက်ပါတယ် ..အားပေးနေပါတယ်း)
August 5, 2009 at 8:02 am	>ကျွန်တော်ရဲ့ ကြင်ဖော်ရဲ့ အတွေးလေးပါ သူအတွေးကို ပုံဖော်ထားတာပါ။ဒီလိုလာဖတ်ပြီး အားပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို ဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် ကျေးဇူးပါဗျာ။
August 5, 2009 at 3:22 pm	>ရွှေလမ်းငွေလမ်းဝင်းကြည်နာမည်ချင်းတူနေတာ ပိုပြီးအားပေးရမှာပါကွယ်။၀င်းကြည် နာမည်ဆိုရင် တခုခုတော့ထူးချွန်ပါလိမ့်မည်…။
Reply	ကောင်းကင်ရဲ့ သမီးပျို
August 5, 2009 at 3:25 pm	>ဘာဟင်းမှမရပါလား ကိုရေချမ်းရယ် လိပ်စာမှားပြီထင်တယ် စကားမစပ် ဆီပုံးကဘယ်ပျောက်သွားတုန်း
August 6, 2009 at 6:34 pm	>ကို ချမ်းစာရေးကောင်းတယ် ဗျဖတ်လိုလဲကောင်းတယ်ဘဝပုံရိပ်တွေကို မြင်သာစေတယ်ချစ်ခင်လေးစားစွာဖြင့်ဖိုးစိန်
August 7, 2009 at 5:37 am	>စကားပြေ ချောတယ်။ အကြောင်းအရာကွက်ကွက်လေးကို သေသပ်စွာ တင်ပြထားတယ်။ တကယ့် ၀တ္တုတိုသမားပဲ။ အကြောင်းအရာပိုင်း ဘ၀သရုပ်ဖော်အနေနဲ့ များများရေးဖို့ အကြံပြုတယ်။ ဇာတ်အိမ်ကို ဒီထက်လည်း ပိုခိုင်စေချင်တယ်။ အားလုံးခြုံပြောရရင် ရသဘလောဂ့်လောကရဲ့ ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်။မိုးမောင်(HappyCloud)
August 7, 2009 at 12:04 pm	>၀တ္ထုတွေဖတ်ရတာကြိုက်လို့ အကုန်ဖတ်ပါတယ်၊ ရေးလည်းရေးချင်လို့ပါ၊ ဒါပေမယ့် မရေးနိုင်သေးပါဘူး။ကိုချမ်းလင်းနေက တကယ်ရေးနိုင်သူပါ၊ ဆက်ပြီးဖတ်ချင်စိတ်ရှိအောင် ဆွဲခေါ်နိုင်ပါတယ်၊ ကိုယ်ပြောချင်တာလေးတွေလည်းထည့်ပြောသွားတယ်၊ ဥပမာ“သြော်…လောကမှာ တာဝန်သိသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါလား။ဒီလူငယ်လေး တာဝန်သိစွာ လက်မှတ်ဝယ်ခဲ့ရင် ထိုသို့သောအကြောင်းများ ဖြစ်လာမည်မဟုတ်။“ ဆိုတာလေးလိုမျိုးပေါ့။၀တ္ထုတိုက အတွေးလေးနဲ့တင် မရတတ်ပါ၊ အပြင်မှာ တကယ်တွေ့ဖူးကြုံဖူးမှ ရေးနိုင်မယ်လို့ထင်တာပါပဲ။အများကြီးဖန်တီးနိုင်ပါစေ။